သင့်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် အကြောင်းအရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingသင့်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် အကြောင်းအရာများ
January 21, 2021 Bo Bo Amazing 0
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ သိပ္ပံညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ သုတေသီတွေ သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ စွန့်စားဖော်ထုတ်မှုတွေကလည်း တကယ့်ကို အံမခန်းလောက်အောင် အသစ်အသစ်တွေကို ပေါ်ထွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဘယ်လို အံ့အားသင့်စရာတွေကို ရွှေခေတ် ကနေတစ်ဆင့်ပြန်လည် ဝေမျှပေးမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါဦးနော် …
၁။ အရောင်ပြောင်းနေတဲ့ ရေအိုင်များ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Kelimutu တောင်ပေါ်မှာတော့ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ရေအိုင် (၃) အိုင်ရှိပါတယ်။ ဒီရေအိုင် (၃) အိုင်က ရေတွေရဲ့အရောင်ဟာ တစ်သမတ်တည်းမရှိဘဲ အပြာ ကနေ အစိမ်း၊ အစိမ်း ကနေ အနက်၊ အနက် ကနေ အနီ စသဖြင့်မျိုးစုံ ပြောင်းလဲနေပါသတဲ့။shwekhitonlinetv.com
၂။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နေကြာပန်း
နေကြာပန်းတွေဟာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွစေတဲ့လှိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိပါသတဲ့။ ဒီအချက်ကို သုတေသနပညာရှင်တွေ အသုံးချခဲ့တာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမား ဓာတ်ပေါင်းဖို ပေါက်ကွဲခဲ့စဉ်ကဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီမြေနေရာတွေမှာ နောက်ပိုင်းနေကြပန်းတွေ အစားထိုးစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။shwekhitonlinetv.com
၃။ နှစ်ချို့နေတဲ့ မီးတောင်ရှင်တစ်လုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုဒေသမှာရှိတဲ့ Yellowstone မီးတောင်ကတော့ ဒီနေ့ထိတိုင်သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေလျှက်ရှိတဲ့ နှစ်ချို့မီးတောင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ မီးတောင်နောက်ဆုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ အီဂျစ်ပြည်မှာ ပိရမစ်တွေ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ အလေ့ကျ အပင်တစ်ပင်ခုတ်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၂၅) နှစ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ Cactus လို့ခေါ်တဲ့ ကန္တာရပေါက်ပင်တစ်မျိုးကို သင့်အနေနဲ့ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်လှဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် (၂၅) နှစ်အထိကျခံရနိုင်ပါသတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
၅။ Moso Bamboo
Moso လို့အမည်ရတဲ့ ဝါးမျိုးစိတ်တစ်မျိုးအကြောင်းကို သင်သိရင် အလွန်အံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Moso ဝါးမျိုးစိတ်တွေက (၂၄) နာရီအတွင်းမှာ (၄) ပေ နီးပါးအထိ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဆင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့သဘာဝအရ အဖော်ဖြစ်တဲ့ ဆင်တစ်ကောင်သေရင် ရင်ကွဲနာကျပြီး လိုက်လံသေဆုံးတတ်ကြပါသတဲ့။ အတော်များများကတော့ သူတို့အဖော်သေဆုံးတဲ့အခါ အသည်းကွဲပြီး အစာမစားတော့ပဲ သေဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၇။ နေခွင့်သာရှိပြီး သေခွင့်မရှိတဲ့ဒေသ
နော်ဝေးလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ Svalbard ကျွန်းမှာတော့ လူတွေဟာ နေလို့ရပေမယ့် သေလို့တော့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာနေထိုင်တဲ့သေဆုံးခါနီးလူတွေကို မသေဆုံးခင်အချိန်မီ နော်ဝေးပြည်မကြီးဆီကို သေဖို့အတွက်သယ်ဆောင်သွားကြရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ရှေးယခင်က ဒီဒေသမှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ သူတွေကိုမြုပ်နှံခဲ့ပေမယ့် အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် ရုပ်အလောင်းတွေဟာ မပုပ်မသိုးတဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယားအသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဖုတ်ကောင် (Zombie) များသဖွယ် ဖြစ်သွားတက်တာကြောင့်ပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၈။ ငလျင်တွေကိုကြိုသိတဲ့ မြွေများ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေထဲမှာ ငလျင်ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆလို့မရတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြွေလိုသတ္တဝါတွေကတော့ ငလျင်တစ်ခုမလှုပ်ခတ်ခင် (၅) ရက်လောက်အလိုကတည်းက ကြိုတင်သိရှိကြပါသတဲ့။ ဒါဟာ ငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့ ကီလိုမီတာ (၁၂၀) လောက်အကွာမှာ ရှိနေတဲ့ မြွေတစ်ကောင်ရဲ့ ငလျင်ဘေးကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၉။ ကြောင်တွေ ညောင် (Meow) လို့ဘာကြောင့်အော်ရသလဲ
ကြောင်လေးတွေသင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တညောင်ညောင် (Meow … Meow) အော်တာကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့ ပြုလုပ်တဲ့အသံမဟုတ်ပါဘူး။ အတိအကျပြောရရင် သူတို့အတွက် ဒီလိုအသံပြုလုပ်ရတာဟာ လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်ပါသတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ လက်သန်းရဲ့ အရေးပါမှု
သင့်လက်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ လက်ချောင်းတွေထဲမှာ ဘယ်လက်ချောင်းက အသန်မာဆုံးလို့ သင့်အနေနဲ့ထင်ပါသလဲ။ လက်ညိုးလား ? လက်မလား စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ လက်ချောင်းထဲမှာ အသေးဆုံးလို့ထင်တဲ့ လက်သန်းကလေး ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လက်ရဲ့ သန်မာမှု (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒီအချက်လေးတွေကတော့ အတော်လေးကိုလူသိနည်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေဖြစ်လို့ ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတ အနည်းနဲ့အများ ရရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော် ….
(Shwe Khit Online TV မှ ရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးကို တခြားပေ့ချ်များတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။)
Photo Shop လား ၊ တကယ့်ပုံ အစစ်လား ဆိုတာ သင့်ကို ခွဲခြားမရအောင် ဖြစ်သွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံ